MakeOwn.App - Mobile App Builder for iOS kunye Android
Guqulela kwaye ufumane i-App yasimahla!
website Umakhi Isoftware yoMakhi weSelfowuni
Uzamo lasimahla Ngema
Yenza iiNkqubo zakho zeSelfowni ze
iOS kunye Android ngaphandle kobunzima!
I-MakeOwn.App yiprimiyamu yokwakha usetyenziso lweselfowuni. Ixhaswa yi-BuildFire kwaye ibanjwe kwiiseva ze-AWS.
Iqonga lethu lokwakha usetyenziso linceda amashishini kunye noosomashishini kwihlabathi liphela ukuba bakhe
kwaye upapashe ii -apps eziphumeleleyo, ngaphandle kokubhala umgca omnye wekhowudi.
Qalisa ukulingwa kweentsuku ezingama-30
Akukho khadi elifunekayo
Isoftware yoMakhi weSelfowuni
I-MakeOwn.App yeyona ndlela ikhawulezayo kunye neyona ilula yokudala iiaphulelo zokusebenza.
Tsala kwaye ulahle i-App Builder
Tsala nje kwaye ulahle indlela yakho ngokwakha usetyenziso ukusuka ekuqaleni, okanye wenze ngokwezifiso itemplate enye.
Iqonga elinamandla kunye neFlexible
Iqonga lethu lokwakha usetyenziso linamandla kwaye liguquka ngokwaneleyo ukuba lingalinganisa nawe njengoko ishishini lakho likhula.
Ukuthenga ngaphakathi nohlelo kunye neeVenkile
Nika amandla izinto ze-e-Commerce kwi-app yakho kwaye uqalise ukwenza imali kumxholo wakho okanye ngokuthengisa iimveliso.
Ukupapasha ngokulula kwiMarike
Ukucofa kanye kukuthatha usetyenziso lwakho lupapashwe kwiVenkile yeApple yeApple nakwiGoogle Play Store.
Umakhi wethu wesoftware ka-DIY ukuvumela ukuba wenze ngokwezifiso yonke imiba yenkqubo yakho ngaphandle kokubhala nayiphi na ikhowudi.
Izaziso zokuTsala ngamandla
Yongeza ukubandakanyeka kunye nokugcinwa kwabaphulaphuli bakho, ngokuthumela imiyalezo yesaziso sokutyhala.
Funda ngakumbi ngeQonga lethu
Faka indawo yentengiso
Yongeza ngokulula ukusebenza okunamandla kwi-app yakho ngeeplagi.
Indawo yethu yentengiso ibandakanya uluhlu olubanzi lokusebenza olugquma uninzi lwazo naziphi na iimfuno zeapp.
Ngokwezobugcisa okanye izinto ezizodwa, unokukhulisa eyakho iplagi, okanye masiyenzele yona.
Isisombululo se-All-In-One sokwakha iApp
Akukho Mngcipheko kunye noKwaneliseka okuQinisekisiweyo
Yakha ngaxeshanye kuzo zonke izixhobo
Guqula iiWebhusayithi zakho kunye neeBlog kwiiNkqubo
Guqulela i-App yakho kulo naluphi na ulwimi
Nxibelelana neGoogle kunye neeNtengiso zikaFacebook
Iitemplate zasimahla zakhiwe kunye neefoto zesitokhwe
Umlingane wethu weTekhnoloji yeApple nguBuildFire
Sibamba iiNkqubo kwiiSeva zikaAmazon
Ukuphucula i-App yakho ngeZapier kunye neCandelo
Imizekelo yoSetyenziso lweSelfowni
Jonga ezinye zeapps ezenziwe ngumakhi wethu wosetyenziso lweselfowuni.
Khuphela iiNkqubo zethu
Ixabiso kunye neziCwangciso
Sinikezela ngezicwangciso zamashishini anobungakanani bonke kunye neeprojekthi.
Ungazama inkonzo yethu ngeentsuku ezingama-30 simahla, akukho khadi lekhredithi elifunekayo kwaye ukuba uthatha isigqibo sokurhuma kwesinye sezicwangciso zethu,
uya kuba nesiqinisekiso sokubuyiselwa imali kwiintsuku ezingama-30.
Yonyaka 50% OFF
iUSD GPB i-eur
Yonke into oyifunayo kufuneka uqale ngokwakha usetyenziso lwakho.
Iintsimbi eziyi-22/ mo
Gcina: $ 324
I-Android kunye neeapps ze-iOS
Izixhobo zeSelfowuni kunye neeThebhulethi
Ukungeniswa kweApp yasimahla
Nyusa usetyenziso lwakho ngamandla ngakumbi kunye neempawu.
Iintsimbi eziyi-46/ mo
Gcina: $ 684
Nyusa usetyenziso lwakho lweshishini ngamathuba aphezulu.
Iintsimbi eziyi-143/ mo
Gcina: $ 2124
Iintsimbi eziyi-40/ mo
Iintsimbi eziyi-84/ mo
Iintsimbi eziyi-260/ mo
Ngaba ulikhaya lezilwanyana,
okanye iQela lokuHanjiswa kwePet?
Masixhase umsebenzi wakho! Iya kuba lilungelo lethu elikhulu
ukunceda abathandi bezilwanyana ukwakha iiapps simahla.
Qhagamshelana nathi Ukufunda kabanzi.
Ngaba uyi-Arhente okanye uMthengisi kwakhona,
okanye uneapps ezininzi?
Bhalisela inkqubo yethu yobambiswano lokuThengisa kwakhona kwaye ufumane izaphulelo zobomi ngazo zonke iinkonzo zethu ezibonelelweyo.
utyelelo Abathengisi Ukufunda kabanzi.
Ngaba unayo umbuzo? Fumana iimpendulo kwi Okubelelwe elwazini okanye u tyelele Umbindi Woncedo.
Fumana izicwangciso zokukhula kwesoftware yamvanje, iindlela kunye nohlaziyo.
Yintoni uPhuculo lwePhepha leMveliso?
I-Apple's Product Page Optimization (PPO) iphakathi kwezinto ezinomdla zamva nje kubaphuhlisi beapp kunye nabathengisi. Ngezigidi zosetyenziso olufumanekayo kwiVenkile yeApp, kuya kuba nzima ngakumbi ukubonwa. Yiyo loo nto ukusebenzisa ukwenziwa kwephepha lemveliso ngokuqinisekileyo kuya kukunika umda kukhuphiswano lwakho. Yintoni ukuphuculwa kwephepha lemveliso? […]
UkuBulala kwemiDlalo yeMidlalo yeSelula kunye neNjani yokuTshintsha
Ubume bemidlalo ephathwayo iyaqhubeka nokuvela nyaka ngamnye, kwaye ukwenziwa ngokutsha kwe-Facebook kwiMeta kusenokwenzeka ukuba kunempembelelo enkulu kwikamva lale midlalo. I-Facebook idlale indima enkulu ekuncedeni imidlalo ephathwayo ifumane ukuthandwa kwindawo yokuqala, kunye nemibono yokuba yintoni ugxininiso olutsha kwi-3D kunye nenyani […]
Ngamana 25, 2022
Iindlela ezili-11 zokwenza iividiyo ezivuziweyo zeNgeniso ye-In-App inomtsalane ngakumbi kubasebenzisi
Ukuba ujonge iindlela zokugcina abasebenzisi besebenzisana ne-app yakho kwaye wandise ukugcinwa, iintengiso zevidiyo ezivuzayo ziyindlela entle yokwenza oko. Iividiyo eziwongwe zenza ukuba abasebenzisi bafumane amabhaso athile angaphakathi kwe-app ngokujonga intengiso yevidiyo emfutshane kangangexesha elithile. Kuxhomekeke kumvuzo kunye neentlobo ze […]
Qasha iNgcali SIMAHLA
Jonga ezinye zeebrendi zethu zehlabathi:
Imigaqo yokuSebenzisa · umthetho wabucala · Satisfaction Guarantee
© 2022 3DMA Ltd.. Onke Amalungelo Agciniwe.
Sisebenzisa ii-cookies kwiwebhusayithi yethu ukukunika amava afanelekileyo ngokukhumbula izinto ozikhethayo kunye nokuphinda utyelelo. Ngokucofa u "Yamkela konke", uyavuma ukusetyenziswa kwazo ZONKE iicookies.